I-Swab Eyenziwe Ngokwezifiso Yotshwala Bezokwelapha Oyinyumba Eno-70% we-isopropyl alcohol
1. Ucezu olulodwa lwe-alcohol swab engalukiwe olugcwele u-70% we-isopropyl alcohol
2. Osayizi abahlukene ngokukhetha kwakho
3. Ukuhlanza indawo edingekayo futhi ulahle ngemva kokusetshenziswa kanye
4. Isetshenziswa endaweni yokubulala amagciwane futhi isetshenziswe ngaphandle kuphela
5. Imininingwane yokupakisha: 1PC/isikhwama, 100PCS/ibhokisi, 100boxes/CTN
6. Imininingwane yokulethwa: Zingakapheli izinsuku ezingama-35 ngemuva kokuthola inkokhelo ephansi engu-30%.
Singumkhiqizi ochwepheshe we-alcohol swabs iminyaka.
Imikhiqizo epakishwe ngokuhambisana nokugcinwa nokuthutha, ukugcinwa nokusetshenziswa ngaphansi kwemibandela yemithetho, kusukela ngosuku lokuqinisekiswa kwekhwalithi yokuvala inzalo yeminyaka emihlanu.
Imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu esibhedlela naselabhorethri ekubulaleni amagciwane esikhumbeni noma entweni.
Le nto ye-bouffant round cap engeyona eyelukiwe inamandla aphezulu kanye nobude, impahla enhle yomoya, kodwa, exosha amanzi, ayinangozi futhi ine-antibacterial.Ngaphandle kwanoma iyiphi insimbi, eco-friendly, ephefumulayo efaneleka ngokukhethekile izimboni ze-elekthronikhi, impilo yansuku zonke, isikole, ukuhlanzwa kwemvelo, ezolimo, isibhedlela kanye nempilo yansuku zonke nokunye.
Ikepisi likadokotela, elibuye libizwe nge-nonwoven nurse cap, ukunwebeka okuhle kuhlinzeka ngokulingana kahle kwekepisi ukuya ekhanda, linganqanda izinwele ukuwa, isudi yanoma yisiphi isitayela sezinwele, futhi lisetshenziselwa ikakhulukazi ulayini wezokwelapha nokudla olahlwayo.
Imaski Yobuso Engalukiwe Engalukiwe Ukotini
1.Singabakhiqizi ochwepheshe bemaski yobuso obungalukiwe obulahlwayo iminyaka.
2.Imikhiqizo yethu inombono omuhle wokubona kanye nokuthinta.
3. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu esibhedlela naselabhorethri ukuze kuvikelwe abantu kumagciwane athathelwanayo kanye nezinhlayiya zothuli ezisemoyeni futhi kusigcine sinempilo.
Ukugqokwa kwesilonda okumhlophe okusobala okungangeni manzi IV
I-IV yokugqokisa amanxeba yenziwa umshini wochwepheshe kanye nethimba.i-PU Film engangenisi amanzi kanye ne-Medical acrylate adhesive material ingaqinisekisa ukukhanya nokuthambile komkhiqizo.Ukuthamba okuphezulu kwenza ukugqokwa kwesilonda se-IV kuphelele ekubopheni isilonda.Ngokuhambisana nezidingo zamakhasimende, singakhiqiza izinhlobo ezahlukene ze-IV zokugqoka amanxeba.
insiza yebhande le-plaster yesilonda engalukiwe eyindilinga engu-22 mm
I-plaster yesilonda(i-band aid) yenziwa umshini ochwepheshe kanye nethimba.PE,PVC,indwangu yendwangu ingaqinisekisa ukukhanya nokuthambile komkhiqizo.Ukuthamba okuphakeme kwenza ukhonkolo lwenxeba(i-band aid) ilungele ukubopha isilonda.Ngokuhambisana nezidingo zabathengi, singakhiqiza izinhlobo ezahlukene ze-plaster yesilonda (i-band aid) .
ukudayiswa okushisayo kwe-povidone-iodine prep pads
Iphedi yokulungiselela eyodwa engu-3*6cm esikhwameni esingu-5*5cm esigcwele Isixazululo se-Providone lodine esingu-10% esilingana no-1% we-lodine etholakalayo.
Impahla Yesikhwama: Iphepha le-aluminium foil, 90g/m2
Usayizi ongalukiwe: 60*30± 2 mm
Isixazululo: nge-10% Povidone-lodine, isixazululo esilingana ne-1% Povidone-lodine
Isixazululo Isisindo: 0.4g - 0.5g
Impahla yebhokisi: amakhadibhodi anobuso obumhlophe nomhlane onamabala;300g/m2
oyinyumba yezokwelapha nge-spunlace enganamatheli e-eye pad
1.I-Absorbency ephezulu kanye nokuthambile
3.Factory intengo ngqo
Isilonda esigqokisa umqulu wombala wesikhumba imbobo yokugqoka isilonda esingalukiwe
Umqulu wokubopha amanxeba wenziwa umshini wochwepheshe kanye nezinto ezilukiwe ze-team.non zingaqinisekisa ukukhanya nokuthambile komkhiqizo.Ukuthamba okuphakeme kwenza ingubo yesilonda esingalukiwe ifaneleke ukubopha isilonda.Ngokuhambisana nezidingo zabathengi, singakhiqiza izinhlobo ezahlukene zokugqokisa amanxeba okungalukiwe.